Praiminisitra Ntsay Christian: “Ho “plaque rouge” avokoa ny fiaram-panjakana” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Ho “plaque rouge” avokoa ny fiaram-panjakana”
“Anisan’ny fanapahan-kevitry ny filankevitry ny governemanta ny fanovana ho “plaque rouge” avokoa ny fiaram-panjakana. Iray volana no omena ny rehetra amin’izany. Amin’izay, hita hoe fiaram-panjakana, ohatra, no manao fampielezan-kevitra. Ny zava-misy: toa lasa goragora loatra ny fitantanana ny asam-panjakana.”
Io ny kabarin’ny Praiminisitra Ntsay Christian tany Belo ambonin’i Tsiribihina, afakomaly, momba ny fanatanterahana ny fifidianana. Anisan’ny laharam-pahamehana ny fifidianana eken’ny besinimaro, ny fijoroan’ny tomponandraikitra rehetra amin’ny tsy fitanilana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana amin’ny alalan’ny fanodinkodinana voka-pifidianana. Tsy azo ekena izany.
Fifidianana ihany no vahaolana
“Ny firosoantsika amin’ny fifidianana madio, malalaka, mangarahara, eken’ny rehetra ihany no lalana hahazoantsika miala amin’izao krizy izao”, hoy izy. Hafany ho an’ny vahoaka àry ny tsy hanekena holalaovin’ny mpanao politika, fa firosoana amin’ny fifidianana izao…
Takina amin’ny tomponandraikitra mikirakira fifidianana ny tsy fitongilanana amin’ny andaniny na ny ankilany. Tsy azo ekena intsony ny fitongilanana amin’ny fanomanana fifidianana eo amin’ny tomponandraikitra eo anivon’ny faritra, ny distrika, ny minisiteran’ny Fitsarana, ny minisiteran’ny Atitany, ny Foloalindahy…
Tsy maintsy manapa-kevitra ny governemanta raha hita taratra ny filalaovana politika avy amin’ny tomponandraikitra misahana ny fifidianana.